WHO Yoongorora Mhando Itsva dzeCovid-19 Dzonyuka kuBotswana, South Africa neBritain
Apo chirwere cheCovid-19 chodzoka zvine mutsindo zvikuru kunyika dzakabudirira paine tumwe tumhando twechirwere ichi, Botswana iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi kuti zvibaiwe nhomba yeCovid-19 kuitira kudzivirirwa kupararira kwechirwere ichi.
Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti riri kushanda neBotswana, South Africa neBritain kuongorora tumwe tumhando tutsva tweCovid-19 twave kunyuka uye twakaonekwa munyika idzi. Botswana neSouth Africa dziri kuongora mhando tunonzi seOmicron BA.4 neBA.5, KuBritain, kamhando kari kuongororwa kanonzi XE.
Izvi zviri kuuya apo kunyika dzakaita seAmerica, Britain neChina dziri kutatarika kurwisana nekupararira kwechirwere ichi.
Izvi zviri kupa kuti nyika dzakaita seZimbabwe neBotswana kuti dzikurudzire vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapurirana Muzvinafundo Davison Sangweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muAmerica vanoti sezvo Covid-19 iri virus, inopota ichichinja chinja.
Asi kunyangwe hazvo nyanzvi dziri kuti nhomba dzeCovid-19 dzinoshanda kudzivirira kupararira nekufa nechirwere ichi, kubaya vanhu kuchiri kunetsa. Vanotungamira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 muZimbabwe Dr Agnes Mahomva vanoti dzimwe nguva manyepo anenge achitaurwa nevamwe vanhu anopa kuti vamwe vazengurire.
Nyika dzakaita seNigeria, South Africa nedzimwe dzakawanda dzakamanikidzwa kuparadza nhomba dzainge dzisina kushandiswa nekuda kwekuzengurira kwevanhu kubayiwa uku. Botswana iri kutyirawo kuti vanhu vakasabayiwa ichapa pedzisira yarasawo nhomba dzakawanda.
Mukuru mubazi rezvehutano muBotswana VaBright Lekoko vanoti kusaenda kunobaiwa nhomba kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunogona kuvhirinhidza hurongwa hwekubaya vanhu muBotswana uye nyika ichirasikirwa nemari yakawanda kana ikasashandisa nhomba dzainenge yatenga.
Bazi rezvehutano muBotswana rakazivisa kuti kune majekiseni zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29, 000 eAstraZeneca akasvika pakusakwanisa kuti ashandiswe sezvo nguva yacho yainge yadarika.
Mashoko aVaLekoko atsinhirwa naMuzvare Basego Mothowaeng, avo vanoshanda semukuru mubazi rezvehutano hweruzhinji, vachiti ongororo yakaitwa nebazi ravo inoratidza kuti vamwe vabvakure vakabaiwa kamwe chete ndoukuenda zvachose.
Muzvare Mothowaeng vaenderera mberi vachiti masangano akazvimirira anoshanda nebazi ravo ari kuti ruzhinji rweavo vasina mvumo yekugara muBotswana rwunotya kuenda kuzvipatara kunobaiwa nhomba rwuchifunga kuti rwungabatwe nemambure emapurisa.
VaTalent Severa, avo vanogara mumusha weTatisiding uyo uri pedyo neguta reFrancistown muBotswana vatenda kuti pane vakawanda vari kuzengurira,
Nyanzvi munyaya dzehutano muguta reGaborone, Dr Edwin Marembo vaudza Studio7 parunhare kuti kubaiwa nhomba chinhu chakanaka kwazvo.
Zvichakadaro, bazi rezvehutano muZimbabwe rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatunevatatu kana kuti 5 463. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi.
Bazi rezvehutano muZimbabwe rinoti rinoda kubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yekudzivirira Covid-19 pakupera kwemwedzi waChikunguru.